Ny fomba namonjen'ny lalàna 500-Mile ahy $ 1,000
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny fomba namonjen'ny lalàna 500-Mile ahy $ 1,000
Airlines • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana US • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
The Fanjakan'i Hawaii namoaka fampitandremana momba ny fahasalamana mba hisorohana ny dia lavitra tsy ilaina rehetra. Rehefa tonga tany Hawaii aho tamin'ny voalohan'ny volana desambra dia tsy nahalala na inona na inona momba ny COVID-19 aho; Tsy fantatro koa hoe rahoviana aho no hiverina any Detroit, ka nividy dia lavitra iray aho. Ankehitriny, avelao aho hiteny aminao ny fomba namonjen'ilay Fitsipika 500 Mile ahy nihoatra ny $ 1,000.
Mampiasa fomba tsy dia fantatra loatra aho hividianana sidina: mividy tapakila marobe izay vidiny ambany noho ny tapakila iray avy amin'ny teboka A ka hatramin'ny B. Ohatra, ny sidina miditra sy mivoaka an'i Toronto dia 75 isan-jato latsaka noho ny sidina miala an'i Detroit. Ka dia nividy tapakila iray ho any Toronto aho, nanolotra famandrihana iraisam-pirenena ho ahy, avy eo nividy tapakila faharoa avy tany Toronto nankany Honolulu. Mora kokoa ny manidina amin'ny kilasy voalohany amin'ny alàlan'ny fanaovana fialan-tsasatra iraisam-pirenena any Kanada toy izay mividy tapakila iray avy any Detroit mankany Honolulu amin'ny kilasy mpanazatra.
Ny tapakila dia tsy vidin'ny mileage fa ny vidiny sy ny tinady no vidiny. Ny fitsipiko ho mpanazatra dia ny mividy raha latsaky ny 5 cents ny kilaometatra ny vidiny. Ny fitsipiko ho an'ny kilasy voalohany dia ny manidina amin'ny fiaramanidina manana seza fandriana mandainga toa ny 777 na 787.
Mampiasa seranam-piaramanidina hafa matetika aho raha azo atao. Nandeha sambo fitsangantsanganana 54 aho. Manidina any amin'ny Broward County / Fort Lauderdale aho (izay $ 18 androany avy any Detroit) avy eo dia mandray tri-rail amin'ny maha-kilemaina ahy mankany amin'ny seranam-piaramanidina Miami raha miala any Dade County ny sambo. Maimaimpoana ny tri-rail ho an'ny sembana. Mahita sidina avy any Detroit mankany Miami aho sahabo amin'ny $ 300, fa ny Fort Lauderdale matetika dia mora kokoa 75%. Raha mitsangantsangana avy any Port Everglades aho dia mpifanila vodirindrina amiko ny seranam-piaramanidina sy ny seranan-tsambo.
Rehefa tonga tany Hawaii tamin'ny taon-dasa aho dia nanomboka nitady tapakila niverina tany Detroit. Averina indray, teo amin'ny 75% teo ho eo ny nanidina tany Toronto, nijanona andro vitsivitsy, ary nividy tapakila faharoa avy any Toronto mankany Detroit. Ny vidin'ny tapakila roa misaraka tanteraka amin'ny kilasy voalohany dia mora kokoa noho ny mpanazatra Honolulu-Detroit.
Tonga ny COVID-19, ary hoy ny mpitsabo ahy: “Aza mandeha fiaramanidina raha tsy aorian'ny Mey.” Manana tsy fetezana hozatry ny hozatra sy tsy fahombiazan'ny voa diabeta aho, ka mampidi-doza loatra amin'ny dia lavitra tsy ilaina. Manaraka ny COVID-19, United dia nanapaka ny sidina iraisam-pireneny. Nanana sidina tsy miato avy any San Francisco mankany Toronto aho. Ny làlan-kalehako vaovao dia nahitana sidina hafahafa izay nanana tongotra 5. Tsy tiako ny sidina nofidin'i United ho ahy. Ankoatr'izay, nisy snafu tsy nampoizina namakivaky an'i Canada.
Manambady italiana aho ary kanadiana, mponina kanadiana ary amerikana ihany no ekena any Canada. Ny Italiana dia tsy raisina an-tanana amin'ny dia tsy ilaina. Niantso an'i United aho hanova ny datiko manomboka amin'ny volana aprily ka hatramin'ny mey, miampy ny fisorohana an'i Canada. Napetrak'izy ireo tamin'ny fiatoana tsy mijanona avy any Honolulu mankany Chicago aho, avy eo nofafany ny ampahan'ny sidina ho any Toronto. Nampahafantatra ahy i United fa tokony handoa azy ireo $ 329 isan'olona ($ 658 isaky ny mpivady) aho noho ny tombontsoa hivoaka ny fiaramanidina any Chicago (fa tsy hanohy any Toronto). Nilaza izy ireo fa hanao swap mihitsy aza ho an'ny tapakila faharoa avy any Toronto mankany Detroit. Izaho dia nandoa $ 229.69 kilasy voalohany isaky ny olona (mitotaly 459.38 $) tamin'ny tapakila faharoa.
Hoy aho tamin'ny United Airlines: "Tsia, tsy te handoa anao $ 658 aho, tiako homenao 459.38 $ aho." Ity karazan-doko ity dia nanakorontana ny volon'izy ireo.
Koa satria nofoanana ny sidina nataoko avy any San Francisco ho any Toronto, dia afaka nanararaotra ny fitsipika 500-kilaometatra aho. Rehefa tapahina ny sidina iray ary diso ny zotram-pitaterana an'habakabaka dia mazàna manaraka ny lalàna mamela ny mpandeha hisidina amin'ny seranam-piaramanidina hafa izay ao anatin'ny 500 kilometatra miala ny toerana nalehanao ny mpandeha zotra - nefa tsy mandoa sarany fanovana na mandoa saran-dàlana fanampiny (ny 500 -Mehy Rule). Na dia mitentina an-jatony dolara bebe kokoa aza ny hahatongavanao any amin'izay alehanao dia tsy mila mandoa izany ianao. Ny hook dia nesorin'ny United San Francisco ho any Toronto, ary izany dia tsy ahy.
Nilaza tamin'i United aho fa tsy nanidina ahy ho any Toronto, nametraka ahy tamin'ny 777 miaraka amina fandriana lainga avy any Honolulu mankany Chicago, avy eo avadiho ny Toronto ho any Detroit, satria 500 kilaometatra eo ho eo ny azy, avereno amiko ny volako rehetra amin'ny tapakila faharoa. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandoavana United $ 658 (manampy / manangona) mifanohitra amin'ny fahazoana ny vola averina $ 459.38 (ho an'ny tapakila faharoa) dia mitentina $ 1,117.38. Ny lalàna 500 kilometatra dia nahavonjy ahy dolara arivo mahery. Mino ve ianao fa mpiasa 6 ao amin'ny United no tsy nahalala ny fisian'ny lalàna raha tsy nanantitrantitra ny isa nisaina ho ahy aho?
Ny fanolorako tena hampiasa seranam-piaramanidina hafa dia mamonjy vola iray taonina amiko. Ny fampisarahana ny sidina amin'ny tapakila mora vidy misimisy dia mampitombo ny fahafaham-ponao ny zotram-piaramanidina iray hanova ny sidina izay ahafahanao miova lalana amin'ny tombotsoanao. Manoro hevitra ny namako rehetra aho mba hanisy fizarana sidina mora vidy toy ny lei handrafitra ny dianao mandroso. Piozila lojika io, fa inona koa no hataonao raha hatokana anao na hialokaloka ao an-trano mandritra ny iray volana ianao?
Azonao atao ny mamaky ny fitsipiky ny famandrihana indray an'ny United amin'ny https://www.united.com/web/en-US/content/agency/bookticket/rebooking-parameters.aspx